पुरुषमा पनि बढ्दै छ स्तन क्यान्सर « Lokpath
२०७७, ७ माघ बुधबार ०७:४६
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ माघ बुधबार ०७:४६
काठमाडौँ । पुरुषमा समेत स्तन क्यान्सर बढ्दै गएको पाइएको छ । सामान्यतया स्तन क्यान्सर महिलाको रोग भनिन्छ तर अध्ययनले पुरुषमा पनि बढ्दै गएको देखाएको छ । अन्कोलोजिस्ट एवं स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ डा. उत्सवमान श्रेष्ठले महिलाको तुलानामा पुरुषमा स्तन क्यान्सर अत्यन्तै कम पाइने भए पनि पछिल्लो समय स्तन क्यान्सर हुने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको बताए ।
६० देखि ७० वर्षका पुरुष स्तन क्यान्सरको उच्च जोखिम समूहमा पर्छन् । उनले कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथाम महिलाको स्तन क्यान्सरसँग मिल्दोजुल्दो हुने बताए । यसबाट पीडित हुने पुरुषको यकिन तथ्यांक नभए पनि बर्सेनि करीब १० जनाको शल्यक्रिया हुँदै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को प्रतिवेदन अनुसार क्यान्सरका बिरामीको संख्या अहिलेकै दरमा बढ्दै जाने हो भने आगामी सन् २०३० सम्म संसारमा ७५ वर्ष उमेर पुग्नुअघि नै ५ मध्ये १ जना पुरुषलाई स्तन क्यान्सर हुनेछ । साथै ८ मध्ये १ जनाको मृत्यु क्यान्सरबाट हुनेछ ।
महिला वा पुरुषको स्तनमा गाँठो आउनु स्तन क्यान्सरको संकेत हो । क्यान्सरविज्ञ डा. श्रेष्ठले भने, ‘स्तनमा छाम्दा गाँठो छ भने स्तन क्यान्सर हुन सक्छ । स्तनमा आएका गाँठागुँठी आफैं छामेर थाहा पाउन सकिन्छ । प्रायः क्यान्सरमा साह्रो किसिमको गाँठो हुन्छ । क्यान्सर स्तनबाट सरेर काखीमुनि पुग्छ, त्यसैले महिलाको स्तन र काखीमुनि गाँठो भेटिनुलाई क्यान्सरको एड्भान्स स्टेज हो ।’
शुरूका चरणमा स्तन क्यान्सर थाहा पाउन कठिन हुन्छ । क्यान्सर बढेर फैलिँदै जाँदा छालामा टाँसिने, रातो हुने, घाउ हुने, दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । पुरुषको स्तन सानो हुने भएकाले स्तन सुन्निएको बाहिरैबाट देखिन्छ । डा. शाहले पुरुषको स्तनमा ट्युमर आउनेबित्तिकै स्तन सुन्निएर बाहिरबाट हेर्दा नै स्तन ठूलो देखिने जानकारी दिए । उभिएर ऐनामा हेर्दा पनि स्तन सुन्निएको देख्न सकिन्छ । स्तन भुक्क उठेको वा ट्युमर बढेको छ भने क्यान्सर हो कि भन्ने शंका गर्न मिल्छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।